China Kosher Gelatin ifektri kanye nabaphakeli | IGelken
IGelken inikeza i-kosher gelatin isitifiketi ngokugcwele futhi zonke izinqubo ze-kosher gelatin yethu zihlangabezana ngokuqinile nezidingo zeKosher. IGelken Kosher gelatin kuzoba lula ukwamukelwa ngabantu abaningi.
I-gelatin ye-kosherl yenziwe ngamathambo ezinkomo. Ihlanzekile futhi ayinakho ukungcola, ine-light light ephezulu ne-lattice ecacile.I-gelatin ye-kosher ine-solubility esheshayo. Lapho wenza ukudla okubhakiwe njengekhekhe le-mousse,i-gelatin ye-kosher ingaqedwa ngokufaka emanzini abandayo umzuzu owodwa. Lapho wenza ubisi olufriziwe, uphudingi namanye ama-dessert, i-gelatin ye-kosher ingafakwa ngqo kuzithako zokufudumeza nokunyakaza.
I-gelatin ye-kosher izokwethula umbala okhethekile ophuzi lapho ichithwa. Lesi sici singashintshwa ngokwelashwa kokushisa ngesikhathi semishini. Ubuchwepheshe besimanje bukwazile ukukhiqiza i-crystal gelatin. I-gelatin ye-kosher enokwandiswa okuphezulu isobala. Le gelatin ye-kosher ivame ukusetshenziswa emikhiqizweni engafuni ukuphazanyiswa umbala.
Ukukhiqizwa kweGelken Kosher Gelatin kuzolawulwa ngokuqinile ukuqinisekisa ukuthi izinto zokusetshenziswa nabahlinzeki bazo bakhethwa ngokucophelela. Zonke izinto zokusetshenziswa ezisetshenziswa ekukhiqizeni i-gelatin zizohlolwa ngokuqinile ukuqinisekisa ikhwalithi engcono kakhulu, ukuphepha nokulandeleka.
Ngenxa yemvelaphi yayo yemvelo, i-kosher gelatin yethu ibhekwa njengokudla kunokungezwayo emazweni amaningi. Isibonelo, eYurophu, i-gelatin ayinayo i-E-code.
Ngaphezu kwalokho, akukho transgene, akukho komzimba kanye nelebuli ye-cholesterol ye-gelatin
IGelatin iyancibilika ekushiseni komzimba, okuyinika ukunambitheka okuhle, ikwenze kube ukukhetha okuhle kwamaswidi anjenge-marshmallows, marshmallows, marshmallows neminye imikhiqizo eminingi yobisi, inyama kanye nama-dessert.
Umthombo wemvelo, akukho ukungezwani komzimba, okulungele ngokuphelele ukusetshenziswa komuntu, ngakho-ke futhi kuyisiphelelisi esifanelekile futhi esisebenza kahle emkhakheni wezokwelapha.
Ngokuphindisela emuva okushisayo, kusho ukuthi ukushisa kungaphenduka uketshezi, ukupholisa kungakha i-gel, futhi ngeke kubhujiswe kaninginingi.
Ukuthungwa okungabonakali, akukho ukunambitheka, ngakho-ke kungacutshungulwa kwamanye ama-flavour noma imibala.
Langaphambilini I-Gelatin yethebhulethi
Olandelayo: Ingulube Gelatin